Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ny atao hoe "haikanto sy siansa". Kanefa rehefa ianarantsika na ampianarintsika araka ny fijerin'ny Baiboly izany ny haikanto sy ny siansa izany, dia inona no ambarany? Haka andininy notsongaina avy ao amin'ny Soratra Masina fotsiny ve isika ohatra, izay mifandraika amin'ny Iafiny manokana amin'ny fitsaboana moderina na ny tantaran'ny zavakanto? Raha manao izany isika dia afaka mampifandray ny fampiharana ny fianarantsika amin'ilay herin'Andriamanitra mahagaga, Izay namorona ity tontolo be kojakojany misy antsika ity. Ny fampidirana fotsiny andinin-tSoratra Masina ao anatin'ny bokin-desona anefa dia ampahany kely monja amin'ny tena fanabeazana marina - dia ilay fanabeazana izay mitondra famonjena sy fanavotana.
Mba hahatonga ny fanabeazana toy izany hahomby dia mila ny Tenin'Andriamanitra isika hampahafantatra antsika ny fomba fampianarana ny taranja rehetra, manomboka amin'ny siansa momba ny olombelona izany ka hatramin'ny biôlôjia momba ny môlekiola (momba ny zava-miaina bitika indrindra ka tsy hitan'ny maso). Raha tsy izany dia ho very tsy ho ao an-tsaintsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny fahefany amin'ny maha-Mpamorona Azy sy Mpamelona ity izao tontolo izao misy antsika ity. Rehefa mianatra ny fomba fijerin'Andriamanitra ny voariny isika, amin'ny maha-zava-manana aina sy manana antom-pisiana izany, dia manjary mahatakatra kokoa ny fomba ahafahana sy tokony hampianarana ireo taranja sasany. Hijery fitsipika vitsivitsy isika amin'ity herinandro ity, izay tafiditra ao anatin'ny fomba ahafahantsika mampianatra ny haikanto sy ny siansa amin'ny fomba fijery kristianina.